May 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အား…ခေါင်းကိုက်လာပြီ ဘာလုပ်ရမလဲ ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်း သေချာပေါက် ဖြစ်ဖူးမဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုက ဘာလဲလို့မေးရင် ကျိန်းသေပေါက် အမှတ်ပြည့်ရမဲ့ အဖြေက “ခေါင်းကိုက်တာ” လို့ပဲဆိုရမယ်။ လူမှန်ရင် ခေါင်းကိုက်ဖူးရမယ်။ တချို့ကတော့ တခါတလေမှ ရှားရှားပါးပါးကိုက်တတ်ကြပေမဲ့ တချို့ကတော့ ခေါင်းဆိုတာ ‘ကိုက်’ဖို့အတွက်သက်သက်ပဲ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြား…
ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ? ‘ဥတုရာသီ တောကိုမှီ’ လို့ဆိုကြသလိုပဲ..ရာသီဥတုတွေ မှန်ကန်မျှတနေဖို့ သစ်ပင်သစ်တောတွေကို မှီခိုအားထားရတယ်။ ဒီလိုပဲ .. လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေဖို့ကျတော့ ‘ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ’ဆိုတာတွေကို မှီခိုနေရတာပေါ့။ ရာသီဥတုပူလို့ ဖြစ်တဲ့…
ထိပ်ကပ်နာကြောင့် ကိုက်တဲ့ခေါင်း ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာထဲက လူတွေ သိပ်သတိမထားမိတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကတော့ ထိပ်ကပ်နာပါပဲ။ ထိပ်ကပ်နာလို့ ပြောရင် တော်တော်များများက နှာစေး..နှာပိတ်..နှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာလို့ပဲ သိကြတယ်။ ခေါင်းနဲ့ မျက်ရိုးမကြာခဏကိုက်နေတတ်တဲ့ လူနာတော်တော်များများမှာ ထိပ်ကပ်နာရှိနေတတ်ပြီး ထိပ်ကပ်နာကို ကုလိုက်တော့မှ ခေါင်းကိုက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ?…
ရိုးရိုးခေါင်းကိုက်တာလား ဦးနှောက်ထဲက အကြိတ်လား လူတိုင်းခေါင်းကိုက်ဖူးသလို ခေါင်းကိုက်တိုင်းလည်း ဘာကြောင့်ကိုက်သလဲ ကိုယ့်ဟာကို အဖြေထုတ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဘာစားမိလို့လဲ ဘယ်သွားမိလို့လဲ.. အိပ်ရေးပျက်လို့လား..အစားပျက်လို့လား..ပူလို့လား..အေးလို့လား..အာရုံကြောအားနည်းလို့လား..ကျီးပေါင်းတက်လို့လား..ဖျားလို့လား.. ဘာလို့ ခေါင်းကိုက်လဲပေါ့။ မှန်တာလည်းမှန် မှားတာတွေလည်းမှားပေါ့။ တချို့တွေကျတော့လည်း ဦးနှောက် အကျိတ် လို ရောဂါအကြီးကြီးတွေများ ဖြစ်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဝင်ပြီး…
'ညှင်း' ရှိမရှိ ရှာကြည့်ပြီးပြီလား
‘ညှင်း’ ရှိမရှိ ရှာကြည့်ပြီးပြီလား ညှင်းဆိုတာ ရှားရှားပါးပါး ရောဂါတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေမှာ အလွယ်တကူတွေ့နိုင်သလို ကိုယ်တိုင်တောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ညှင်းဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင်တော့ fungal infection ဆိုတဲ့ မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားရောဂါ တစ်မျိုးပါပဲ။ Tinea versicolor…
'ညှင်း' တွေ့တာနဲ့ ငိုရတော့မလား
‘ညှင်း’ တွေ့တာနဲ့ ငိုရတော့မလား ငိုစရာမဟုတ်ပေမဲ့ သေချာတာကတော့ ‘ညှင်း’ပေါက်တာ ပျော်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူသူကိုယ်ကိုယ် စိတ်ညစ်မှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် မမှုဘဲ ပစ်ထားတတ်တဲ့ တချို့ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ သိပ်အရေးမပါတဲ့ အကွက်တွေဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ‘အလှအပ’ဆိုတာကို ချပ်ဝတ်တန်ဆာ လက်နက်တစ်ခုလို…
'ညှင်း' ဆိုတာ ဘာလဲ.. ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ.. အန္တရာယ်ရှိလား
‘ညှင်း’ ဆိုတာ ဘာလဲ.. ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ.. အန္တရာယ်ရှိလား ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ‘ပွေး ၊ ဝဲ ၊ ညှင်း’ ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရှိတယ်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းဆိုပေမဲ့ ခုထိလည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ။ သူတို့သုံးယောက်က လူတွေရဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ မကြာခဏ သွားနေပြီး…
'ညှင်း'ကို မုန်း၍ လိမ်းခဲ့သည်
? ‘ညှင်း’ကို မုန်း၍ လိမ်းခဲ့သည် ? မုန်းသင့်တာပေါ့။ မုန်းလည်း မုန်းချင်စရာ။ ‘ညှင်း’ တဲ့။ အသံထွက်ကအစ ဗီလိန်တစ်ယောက် မခိုးမခန့် ရယ်တဲ့အသံမျိုးနဲ့။ လူက လှချင်ရက် စက်စက်ယိုသည့် ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှာ တစ်ရက်လျော့သည့်အရွယ်။ ပေါက်လာတဲ့ ညှင်းကွက်တွေက လူမြင်သာတဲ့…
သွေးတိုးအကြောင်း သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါ မဟုတ်ပေမဲ့ သွေးပေါင်ချိန် 130/80 ထက် ပိုတက်ဖူးရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါဟုတ်မဟုတ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အိမ်မှာပဲ Digital သွေးပေါင်ချိန်စက်တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်လို့ ရနေပါပြီ။ သွေးပေါင်ချိန်စက်ဘာအမျိုးအစားသုံးမှာလဲ? “အမြဲတမ်း အဖြေတွေမှန်ကန်တိကျတယ်” လို့ဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ခံမှု…